Mannequins ho an'ny mpiasa trolling izay mandeha milamina amoron-dàlana | Famoronana an-tserasera
Mark Jenkins dia mpanakanto iray izay Machiavellically nametraka mannequins 30 misy fihetsika tena misy any amin'ny faritra samihafa eto amin'ity planeta ity ary raha vao jerena dia hifangaro amin'ny olona ara-dalàna isika izay misy zavatra mitranga.
Fomba iray "Trolling" mpiasa ary amin'izany dia afa-po ny ahiahin'ity mpanakanto ity izay mikasa ny hanao fitokonana mafy ao an-tsain'ny olona. Raha lazaintsika fa mikapoka mafy dia noho ny fihantsiana ataon'ny posy mannequin miisa 30 napetraka tamim-pitandremana tany amin'ny faritra sasany amin'ireo tanàna manan-danja indrindra eto an-tany.
Jenkings manao fitsikerana ny fiaraha-monina miaraka amin'ireo pose nalain'ny mannequins 30. Ny ezahiny atao dia ny mametraka fanontaniana izay azo antoka fa tsy tonga amintsika. Noho izany dia manokatra toerana ao an-tsaintsika ny hanana fisainana mitsikera kely kokoa.
Ary ny marina dia misy ireo manequins tena tsara toerana mahay manaitra antsika. Avy amin'ny iray napetraka tao anaty tionelina toa ny mitazona ny rindrina roa, na ny iray hafa tsy misy lohany voahidy amin'ny rindrin'ny zoron'ny tanàna lehibe iray.
Ary hahatonga antsika hitebiteby kokoa noho ny raha mijery ny tafon-trano ambony mihaona amina andian-dahatsary tahaka ny mandinika antsika izahay na manohitra anay tsotra fotsiny.
Ary tsy misy mannequin hafa miaraka a fifamoivoizana famantarana kioba nilatsaka tamin'ny rindrina, na ilay iray hafa izay nofonosina fantsona plastika mba hampisehoana an'izao tontolo izao an'io fitaovana noforoninay io.
Este milalao ny mason'ilay mpandalo fa efa zatra scénario mahazatra be ianao. Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha an'io mannequin nohitsakitsahana tamin'ny loharano io, miaraka amin'ny paoziny tsy milamina, izay mihantsy izay olona mandalo eo akaikiny. Mandao anao izahay miaraka amin'i Melgrati sy ny fitsikerany ny fiaraha-monina.
Anananao ny azy Instagram.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Manequin miisa 30 hita amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao mba hitaterana mpandeha an-tongotra
IBM dia nanala ny famantaranandro izay nivadika ho takelaka